Ukupha kwamahhala kokudla namuhla eduze kwami ​​namabhange okudla okuphuthumayo
By UChrisking September 16, 2021 Ukudla, izinto zamahhala zemindeni ehola kancane 0 Amazwana
- Ukupha kwamahhala kokudla namuhla eduze kwami ​​-
Sonke siyaludinga usizo ngezikhathi ezithile. Njengamanje, kunanini ngaphambili, ukunakekelwa kwenhlangano yaseMelika yamabhange okudla kulapha ukukusiza ekutholeni ukungena ekudleni nakolunye usizo.
Njengoba ingqikithi yesifiso sendawo isishintshile, i-Food Safe ithuthukile. Amaphrojekthi ethu abhekela izidingo ezithile zemibuthano ehlanganisiwe, kufaka phakathi intsha, abantu abadala asebekhulile, nabomakadebona.
Imininingwane Ethakazelisayo Ngokunikezwa Kokudla kwamahhala Namuhla Eduze Kwami
Ngaphambi kokubheka i-Free Food Giveaway Namuhla Eduze Kwami, sicela uqaphele. Amabhange okudla aseduze nezindawo zokugcina mahhala zokudla yizindawo ezingavamile ongaya kuzo ukuthola usizo.
Lezi zindawo zizodlulisa ukudla kwamahhala, ukudla, ukuhlanzeka ngakunye, nezinhlobo ezahlukahlukene zosizo olungeyona imali.
Inani elikhulu labantu nemindeni balwa nokunakekela imindeni yabo ngesimo esingalindelekile, futhi indawo yokugcina indawo enhle ongaya kuyo ukuthola usizo nanamuhla.
Ngenkathi mhlawumbe ezinyangeni ezithile abantu abaningi belungile, kungaba nezikhathi ezibekiwe ezahlukahlukene ngenxa yesikweletu esimangazayo noma ukwehla komholo okungakwenza ukuthi kuhlolwe ngokujulile.
Esimeni esibucayi, igumbi lokugcina lamahhala (elirekhodwe ngaphansi kombuso) lingasiza.
Iningi lemindeni ephansi ukuze iqondise imindeni ngokufanayo ilwela ukugcina ukudla etafuleni layo ngenxa yezindleko ezikhulayo zezinto eziyisisekelo njengomnotho ongenamandla.
Inani elikhulu labantu bathola uhlobo oluthile losizo lokudla kusuka kulokhu kugxila minyaka yonke. Amahhovisi asiza ngokunakekela abasebenzayo, abahlwempu, imindeni ehlala ekusweleni, njengoba nje nemindeni ekhokha ngokulingene.
Ilawula Kanjani Imindeni?
Ngasekupheleni kwesikhathi, amazwi avela kowesifazane azama ukukhulisa ingane ngomsebenzi oyi- $ 8.00 ngehora. Ukuqasha kwakhe kungu- $ 635 njalo ngenyanga, kanti ukunakekelwa kwezingane kumubiza u- $ 175 ngenyanga, futhi izinsiza zingama- $ 150.
Lokho kushiya u- $ 1,220 njalo ngenyanga ngemuva kwezindleko ukugxila kubantu ababili.
Futhi, lokho kushiya ama- $ 65 masonto onke ukukhokhela ukudla okuyisisekelo izinto zokuhamba / igesi, isidlo sasemini, kanye nokungavumelani nokuphela. Lokhu kungumongo wabampofu abasebenzayo.
Azenzi okwanele ukugxila emndenini wakho, futhi eziningi zenza okuningi ukuthola usizo lukahulumeni. Uma udinga ithuba, ungadinga ukuya endaweni yokugcina yendawo ukuze uthole usizo.
Izinhlelo Zosizo Ezihlinzekwa kuma-Pantries Wokudla Okuphuthumayo
Ngaphandle kwedatha yezikhala zokugcina ukudla ezirekhodwe ngaphansi, imindeni inezindawo ezahlukahlukene zokuya kuzo ukuthola usizo namuhla. Njengoba isikhungo esisodwa sizohlala njalo sinqanda indlala, ikakhulukazi ezinganeni njengasebekhulile.
Ngakho-ke uma ulwa, kunezimpahla ezahlukahlukene ezifinyelelekayo. Ingxenye yalezi ezinye izindlela ifaka phakathi:
Izinhlelo Zikahulumeni Zokulekelela Ngokudla
Uhulumeni omkhulu uqhuba izinhlelo ezingenakubalwa zokusiza abantu abahola kancane njengoba nje nemindeni isenkingeni. Kungaba khona usizo oluvela kuhulumeni njengoba nje nososeshini besifundazwe. Ziyatholakala ezweni lonke.
Okuningi kuzinhlelo zikahulumeni zosizo lokudla.
Izinhlelo Zosizo Zendawo Yokulondolozwa Kokudla
Lesi ngesinye sezisekelo zokushayela ezweni. Isisekelo senkolo yobuKristu sisekela abantu abanganaki kangako inkolo yabo, ubuhlanga, isimo sokunyakaza, noma ubudala.
Amabhange okudla amahhala, amakhishi esobho, usizo lwemali ebucayi, nokunye ukunakekelwa kwamaphrojekthi kutholakala kakhulu. Basiza imindeni engakwazi ukuzivikela, abasebenzi kanye nemindeni elwayo. Thola ubuqili kuvuliwe Insindiso Amabhange okudla angenawo amandla okusondele kuwe.
Ukudla Okunesizotha Futhi Okumakwe Phansi
Izinhlangano, isibonelo, uGabelli, iSinkwa Sokulindelwa, nesithunywa Esingcwele Izinsiza Zokudla nikeza ukudla kufinyelela kuma-40% kuzindleko ezijwayelekile zokuthengisa.
Le minyango iyatholakala kunoma ngubani, ikhokha kancane ekukhokheni kwayo, futhi akukho zinkokhelo zokuyisebenzisa. Lokhu kuvumela imindeni ukuthi yonge amadola amaningi unyaka nonyaka ezindlekweni zayo eziyinhloko. Sebenzisa okuningi ngokudla okulingene.
Izinhlangano zizonikeza abathengi izimali ezibucayi zokutshala imali ezivela kumakhuphoni angaphrintwa kahle.
Kungazisebenzisela ukukhokhela ukudla nokudla kepha ngokungeziwe izinto zokucatshangelwa komuntu ngamunye, izimpahla zesilwane, neziphuzo.
Lokhu kungasetshenziswa kunoma imuphi umthengisi, noma kuhlanganiswe nokuphathwa okuvela ebhange lokudla, ukusindisa imindeni kakhulu.
Imindeni efuna ezinye izindlela ezihlukile ingathola idatha eningi kwizivumelwano zasekhuphoni zamahhala. Ngenkathi zingasetshenziswa egumbini lokugcina, ukudla okuningi okusha futhi njengoba bengathenga izimpahla zomndeni bekusebenzisa. Kusetshenziswa amabhange okudla namakhuphoni kuphumelela ngokukhethekile.
Ukudla Ngezikhathi, Kokubili ngoKhisimusi naku-Thanksgiving
Lokhu kufinyeleleka kusuka kumabhange amaningi okudla nezindawo zokugcina. Abanye banikeza ukudla kwamahhala njengokulungiswa, noma ukudla kwakusihlwa okuphelele, eceleni kwezipho ezincane noma amathoyizi.
Noma-ke futhi babamba imibuthano nokuhlangana komndeni wonke. Thola ubuqili ngendlela engcono yokuthola usizo lwamahhala ngoKhisimusi.
Izingane Zentsha Yabesifazane - WIC
Lolu olunye uhlelo lukahulumeni oludumile lokusiza abantu abahola kancane. Ukugcizelela okuthile kuqinisekisa izinsana njengoba nomama abakhulelwe bethola ukondleka abakudingayo.
Izindlela zokupheka zezingane mahhala noma ezincane, izinto zokudla nolunye usizo olunempilo ziyatholakala, kaningi njengezaphulelo noma amakhadi wokuhlola. Sebenzisa okuningi kuhlelo lwe-WIC - Ladies Baby Kids.
Izitembu Zokudla noma i-TANF
Cishe abantu abayizigidi ezingama-40 baseMelika bathola uhlobo oluthile lwamavawusha okudla kuhulumeni ophakathi oxhasa uhlelo lweSNAP. I-TANF nayo ingasetshenziswa ukusiza ukukhokhela izidingo ezibalulekile.
Amavawusha angaveza imali ephansi engenayo futhi inciphise ukudla kwezindleko. Okuningi kuzitembu zokudla ze-TANF.
Izidingo ezibalulekile, ngokwesibonelo, izipho zesikhathi samahhala, izimpahla zezingane, izicathulo, izimpahla zesikole, okokugqoka nomsebenzi nokuningi kunganikezwa, njalo namuhla. Izingubo zokugqoka kanye nokusakazwa kwegazi kugxila ekunikezeni izinto mahhala.
Ngenkathi lezi zindawo zivamise ukungabi nokudla, ukukwazi ukuthola lokhu kuthengiswa okuhlukile kokugxilwe kukho kungasiza imindeni ngokuvula imali yayo yokuthenga ukudla. Thola ukuthunyelwa kokuhlinzekwa okuvela emabhange okugqoka.
Ungazithola kanjani izinto zamahhala ezinkampanini
Amahembe AseKholeji Amahhala
Ungathengisa Kanjani Izicathulo Ku-inthanethi
Amabhange Okudla Ahamba Phambili Nama-Pantries Eduze Kwami
1. Ukondla iMelika
Ukunakekela abaseMelika yaqala njengendlu yokuhlanza izipho zokudla kulo lonke elase-US ngo-1979. Namuhla mhlawumbe iyinhlangano enkulu kakhulu yosizo lwendlala ezweni.
Baxhumana namabhange okudla angaphezu kwama-200 namakamelo okugcina angama-60,000 namahhovisi ohlelo lwesidlo saseMelika
2. Izinkwa Nezinhlanzi
Izingxenye nezinhlanzi yinhlangano ezingenzi nzuzo engu-501 (c) (3). Inhloso yabo ukuqeda indlala futhi baphathe okulindelwe nenhlonipho emiphakathini enganakiwe.
Baqhuba usoseshini nosizo lwamavolontiya nezindawo zendawo zokukhulekela ukudla nezinto zokugeza.
3. Ayikho Ingane Elambile
Intsha eyodwa kwengu-1 ishaya i-hay ilambile ngokungaguquguquki. Izindlela ezinhle ezinkulu ezitholwa yintsha encane bekusezikoleni.
Namuhla ngenxa yalolu bhubhane, izikole eziningi zivaliwe futhi kungashiya abancane belambile uma ngabe bekungekho kwezinhlelo zokudla.
Ayikho Ingane Elambile ine 'mephu yokudla' lapho ungathola khona izindawo ezahlukahlukene esikhaleni sakho ukuthola ukudla. Faka isifunda sakho seposi, noma idolobha lakho nedolobha ukuze uthole amadina mahhala akhonzwa eduze nawe.
5. AmaSobho Amakhishi kanye Nokudla Kwamahhala
Kanye nokuthola usizo lwenkinga esitolo samahhala sokudla, kukhona okunye okufakwayo okunikeza izidlo, ikakhulukazi ibutho leSalvation Armed.
Bazobasebenzela ubuso nobuso, badlulisele ukudla kwamahhala noma okubandayo kokuya ekhaya, bondle abantu ngezikhathi ezikhethekile zonyaka, nokunye okuningi.
Abantu abampofu, abaswele, nalabo abasesimweni esiphuthumayo sesikhashana bonke bazokwazi ukuthola amadili amahhala ashisayo noma abandayo avela ezindaweni ezahlukahlukene ezingasondela kuwe. Thola isundundundu lamakhishi esobho wensindiso.
Luthini Uhlelo lwe-US Lokuthenga Amabhange Wokudla?
I-OneHarvest uhlelo lokuthenga. Ikona okungezona ezenkolo nezenkolo, ivulekele bonke abantu. Noma ngubani angathenga ukudla ngokumaka okukhulu.
Njalo ngenyanga banemenyu. Izinyama zakho zangaphambi kwesicelo sakho, nemifino, nezinhlobo zokudla ezahlukahlukene bese uthola ukukhetha kwakho ngesikhathi esabelwe.
Ngabe Amabhange Okudla Wendawo Angakusiza Kanjani?
Amabhange endawo angasiza ukusiza i-Free Food Giveaway Namuhla Eduze Kwami ngo:
Kudidiyelwe idrayivu yendawo yokudla ukusiza ngokudlulisa ukudla.
Ukunikeza kungathengisa kumabhange akho okudla aseduze noma ekhishini lesobho.
Uma kwenzeka unethuba, cabanga ukungena ekhishini lesobho noma ebhange lokudla.
Phila ngo- $ 7 nsuku zonke ukuze unakekele umndeni wakho, ukuze ubone ukuthi umuntu unjani SNAP izimpilo.
Khombisa izingane zakho ukuthi zingasaphazi ukudla. (Uma ucabanga ukuthi udinga ukubona ukuthi kungakanani ukudla abantu abakusaphazayo, iya kunoma iyiphi i-buffet. Akududuzi)
Izinhlelo Zikahulumeni Ezitholakalayo Zokusiza Ezinsukwini Ezingaphambili
Kungakhathalekile ukuthi uhlezi ujabulile noma usebenzise usizo lokudla ngaphambi kobhadane lweCoronavirus, izinhlelo ezahlukahlukene zikahulumeni ziyafinyeleleka ukusiza ngokwenza imali esezingeni eliphakeme ngezikhathi ezinzima.
I-SNAP (Uhlelo Lokulekelela Lokondla)
Lokhu kufaka isandla kokunye kokunikezwa kwamahhala kokudla namuhla eduze kwami. Lokhu ngaphambili kwakwaziwa njengezitembu zokudla. Kusukela manje kunikeza umuntu oyedwa kwabangu-1 baseMelika ngosizo lokuthola imali.
Bona ukuthi ufanelekile yini futhi uthole ukuthi ungafika kanjani ezinzuzweni zakho ze-SNAP. Singakwazi ikuxhumanise nohlelo lwakho losizo lwebhange lakho lokudla.
Amaphrojekthi Okudla Kwabasha
Banikeza izingane ukudla kwakusihlwa okumnandi nokudla okulula okumnandi ngenkathi bengafundi. Xhumana nebhange lakho lokudla eliseduzane bona lapho kunezindawo zokudla kwakusihlwa esikhaleni sakho.
Izinhlelo ze-WIC (Ladies and Baby Youngsters)
Banikeza ukudla okuqinile, okwengeza kubantu abakhokha kancane abakhulelwe futhi abanezingane ezineminyaka emihlanu nangaphansi. Bona ukuthi ufanelekile yini futhi xhumana nenhlangano yakho ye-WIC yombuso ukufaka isicelo.
Ukuhlola lokhu kuqhubekela phambili kumaphrojekthi kahulumeni kungaba yinkinga ngesikhathi esikhathazayo empilweni yakho. Silapha ukukusiza ngokuthola konke.
Siphendule imibuzo ebuzwa njalo mayelana nezinguquko ezinhlelweni zosizo lokudla ngesikhathi seCoronavirus.
Izinhlelo Zokusebenza Ze-Inthanethi Zamahhala Zeselula
Yenza Imali ngemoto yakho
Ukuphepha kwakho kukhathaza kakhulu Inhlangano Yokunakekela iMelika. Njengoba ICoronavirus kuthinta izwe lethu, amabhange amaningi okudla, izindawo zokugcina ukudla, nezinhlelo zokudla kwakusihlwa ziyashintsha ukuqinisekisa ukuphepha kwezivakashi nokudla ezikunikezayo.
I-assortment yezinketho zokuxhumana eziphansi noma ezingatholakali okwamanje iyatholakala ezindaweni eziningi, kufaka phakathi abantu abadala-amahora nje, ukudlula emakamelweni okugcina, ukuphathwa kokuhanjiswa kwekhaya okunwetshiwe, futhi lokho kungukuphela kweqhwa.
Sesha ngesifunda seposi noma ngombuso usebenzisa othole ibhange lokudla, bese uthinte ibhange lokudla elisebenzela isifunda sakho. Bazofuna ukukunikeza idatha kumagumbi wokugcina wamahhala namaphrojekthi aseduzane nawe.
Sicela ushiye amazwana mayelana nalesi sihloko ku-Free Food Giveaway Namuhla Eduze Kwami. Futhi, zizwe ukhululekile ukuyithanda, bese utshela abangane bakho nomndeni wakho ngakho.
Tags:amasonto anikezela ngokudla eduze kwami, drive-thru ukudla okuphekiwe eduze kwami, ukunikezwa kokudla eduze kwami ​​namuhla, okunikezwa ukudla kusasa, igrosa yamahhala eduze kwami, ngidinga usizo ngokudla namuhla, isheduli yokudla kwamaselula 2020 eduze kwami, isheduli yokudla kwamaselula 2021 eduze kwami
Ungayithola Kanjani I-Pizza & Iziphesheli Zamahhala zeDomino Ezisebenzayo
Ukudla kweMedithera Eduze Kwami kanye nerestshurenti ehamba phambili eMedithera e-US
Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezingama-25 zebhulakufesi eduzane nawe e-USA nase-Instanbul